I-Anorexia nervosa kwabasetyhini abavuthiweyo
Ukufikelela kwiminyaka ekhulileyo, abafazi abaninzi baqala ukuthatha isimo sengqondo esibaluleke ngakumbi ekubhekeleni kwabo, ngokukodwa, kwimeko yabo. Ngexesha elifanayo, ingqalelo engapheliyo yokuhlawulwa kwenkqubo yokutya komntu ngaphambi komtshato. Kwaye ke, omnye umzuzu omhle, efika kwisibuko kwaye unqwenela ukumbamba i-mini-skirt yakhe, intombazana leyo iyamemeza ithi: "Yeka indlela eyoyikisayo! Ndiye ndomelela kakhulu! "Indlela kuphela yokuphuma kwimeko kukuba ufumane ukutya ngokukhawuleza okanye ukulambalala. Kodwa qaphela! Kwimeko enjalo kunye neemeko ezinjalo, i-anorexia nervosa kwabasetyhini abavuthiweyo yimeko yezokwelapha.
Enyanisweni, emva komtshato kunye nokuzalwa komntwana, abaninzi abafazi baxhalabele kakhulu ngemicimbi yentsapho - ukukhulisa abantwana, ukulungiselela ukutya, ukuhlamba, ukucoca, njl. Ukubonakala kwabo kwabasetyhini abaneminyaka elikhulileyo, njengomthetho, bahlawule ingqalelo encinane baze baqhelane okanye bavale abantu baqala ukuthetha ngokukrakra ngokubonakala kobunzima bomzimba obuninzi. Isisombululo kwingxaki yokubonakala kweekhilogram "ezongezelelweyo" kuxhomekeka kakhulu kwi-psychomotional stability yezesondo ezifanelekileyo. Ukuba ngaba umfazi ulungelelanisekile ngokomzwelo, ngoko ke uya kuthatha inqaku elinobubele malunga nokuphelela kwakhe ngokugqithiseleyo kwaye uzame ukulungisa imeko ngokuchanekileyo-cwangcisa ngokutya ngokunyameko, ukunciphisa ukusetyenziswa kokutya okuphezulu, kunye nokwandisa umsebenzi wakhe ngokuya kwiiseshoni zoqeqesho kwimigangatho yezemidlalo.
Nangona kunjalo, ukuba ibhinqa liyakhathazeka kakhulu kwiingxelo ezivela ngaphandle, izitatimenti ezinjalo zingabangela impembelelo enkulu kummandla wengqondo yakhe. Kule meko, unokuqala ukuhlakulela i-anorexia enobuhlungu - ukungala ukudla, ngenxa yokuphulwa kombuso we-neuropsychic womntu. Ukufikelela kubantu abadala kunye nokuqaphela ukubonakala kobunzima obunzima, umfazi uqala ukwesaba zonke iimeko ezimbi ezinxulumene nombuso wesimo sakhe: ukulahleka kwezinto ezithandekayo kubantu besini esahlukileyo, ukwesaba ukushiywa ngumyeni wakhe, ukugculelwa koogxa emsebenzini, njl njl. Kwinqanaba leengqondo, ukuphazamiseka kokutya kunye nenkqubo yokutya kokuqala kuqale ukuphuhlisa. Ngenxa yendlala, eyenzekayo xa i-anorexia nervosa (abaphi na abasebenzi bezonyango bajonga ukuba iyona yesifo esiyinyani kwaye siyingozi), umfazi ngokukhawuleza ulahlekelwa isisindo, kodwa kungekhona nje i-fat deposits, kodwa kunye nezicubu ze-muscle ziyadla. Ibhinqa likhula ngokukhawuleza, ngelixa umzimba wakhe ufikelele ekudeni, kwaye ngaphandle kokungenelela kwengqondo kunye nezokwelapha, isiphumo esibulalayo singenzeka.
Ukuncediswa kwabasetyhini abavuthiweyo abanesifo se-anorexia nervosa, okokuqala, kufuneka baququzelele ngokufanelekileyo ngogqirha wengqondo (mhlawumbi unyango lwezonyango luyadingeka), ukudala umoya okhuselekayo wengqondo kunye nokunyaniseka kwintsapho kunye nabahlobo, kwaye zilandela iziphakamiso zesondlo sezondlo. Into ephambili ukuba bonke abameli beendawo ezikufuphi kufuneka benze isigulane nge-anorexia nervosa kukumxelela ukuba ubunzima obunzima bowesifazane abukho ngandlela-thile echaphazela ukuqonda kwakhe ngabanye abantu.
Kwaye abo bafazi abakhulileyo abangakhathazeki ngokungathandabuzeki malunga nombuso wabantu babo ngenxa yokuba bane "kilogram" ezingakumbi, akufuneki ukuba baphele ithemba kunye nokuxinezeleka (okuya kuba yimfuneko ebalulekileyo ekuphuhliseni i-anorexia nervosa). Kungcono ukucwangcisa ngokucokisekileyo ukutya kwakho ngokuhambelana neengcebiso zendlela yokutya kunye nokuzama ukuqhuba ubomi obusebenzayo - ezi ziyinxalenye ebalulekileyo yokulwa nokuphumelela ubunzima bomzimba obuninzi. Ekubeni kwimeko evuyayo kunye nokuthokoza komoya, umntu akanako ukwesaba ukuvelisa isifo esibi kakhulu, esiyi-anorexia nervosa.
Iityuwa zetyuli kwimpilo yabantu
Imveliso emi-5 ephezulu yesifo sikashukela
Izakhiwo zokwelapha zobusi
Kwiintlobo zoncedo zamaqanda ezinqamana
Iingcebiso kulabo abafisa ukuba ngumhlaza
Imveliso ye-TOP-10 yokutya ekwazi ukuphucula imvakalelo
Ukukhulelwa komfazi kwiminyaka emithathu
Ungagqiba njani ukugqiba ingxowa ngeenaliti zokudibanisa?
Ukuvuvukala komqala ngexesha lokukhulelwa
Yaziwa isicwangciso seBond entsha
Izibalo ezilula: Indlela yokubala iekhalori zokunciphisa umzimba
Imiba yengozi yokungabikho komntwana kwabantwana
Iigwele kunye anyanisi kunye noshizi
Unyango lweendlela zesintu ezingenalo ukungabikho
Indlela yokuqala ubomi obutsha emva komtshato?
Izipikili ezibumnyama: eziphezulu ezilishumi eziphezulu ze-Halloween
UPawulos uya kudlala uPlato
Abantwana bakaFilip Kirkorov bakhuliswa ngumama wabo
Iikhabethe ezibophekayo zingu-2016